Agoosto | 2007 | WEEJIDOW
Archive for Agoosto, 2007
Shirkii Asmara ka furmi lahaa maanta oo laga dhigey Khamiist, 6 Sept 2007 dhigay
Agoosto 31, 2007
Shirkii lagu waday in bisha bilaaban doonta uu ka furmo magaalada xarunta u ah Dalka Eritrea ee Asmara, ayaa dib loo dhigay, illaa iyo Maalinta Khamiista ee bisha Sebtember 6 / 2007.
Shirkan ayaa la filayay in ay isugu tagaan xubno fara badan, oo iyagu ka kala imaanaya sida la tilmaamay qaar ka mid ah wadamada caalaamka & dalka gudihiisa, si ay u mideeyaan mowqifyadooda ka dhanka ah joogitaanka ciidamada Ethiopia gudaha Somalia.
Xunahan ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsanaa Golihii Maxkamadaha Islaamiga iyo kan Baarlamaanka federaalka KMG ah ee Somalia, balse dib ayaa loo dhigay, sida ay ku warantay Wakaaladda wararka ee Reuters.
Wakaaladda oo soo xigatay dad diblomaasiyiin ah, ayaan xustey sababta dib u dhaca keentay in ay tahay in weli la soo daad gureynayo martidii ka qeyb geli lahayd, iyadoo hadda ay joogaan ilaa 450 qof.
Waxaa uu kusoo beegmay dib u dhacan, xilli maalinimadii shalay shirkii ka socday Muqdisho, lasoo gaba gabeeyay, kaa oo mudo 45-cesho soconayay.
Dowladda KMG ah oo safiir cusub u magacowday Ethiopia
Dowladda KJMG ah ee Somalia ayaa maanta wareegto ay soo saartay waxa ay xilkii kaga xayuubisay safiirkii dowladda Somalia u fadiyay magaalada Adis-ababa ee dalka Ethiopia, isla markaana ahaa Ergeyga Somalia u fadhiya Midowga Africa C/kariim Laqanyo.Wareegtada xilka looga qaaday Mas’uulkaan ayaa isla maanta waxaa lagu magacaabay Ing, Yuusuf Nuur in uu noqdo safiirka cusub ee Somali u fadhiya dalka Ethiopia Sida uu Shabelle u sheegay Afhayeenka dowladda KMG ah, Cabdi Xaaji Goobdoon.
Afhayeenka waxa uu sheegay in C/kariim loo badalay dal kale inkastoo uusan sheegin.
Arimahaan ayaa ku soo beegmaya xilli xiisado ay ka oogan yihiin dalka Somalia oo wali aysan ka howl-galin intiisa badan safaaradaha dalka ugu waaweyn caalamka.
War Deg Deg ah: Pr: Dalxa oo ku eedeyey Xukuumada Ra’isal wasaare Geedi in ay si qaldan u qeybisay Safiirada iyo Taliska Ciidamada
Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee Golaha Baarlamanka Somaliya Max’ed Cumar Dhalxa ayaa shaaca ka qaaday in dhawaan Baarlamanka Somaliya ay la xisaabtami doonaan dhamaan taliyeyaasha Ciidamada kala duwan ee Somaliya,isagoona hab aan wanaagsaneyn ku tilmaamay qaabkii loo magacaabay safiirada dawladda.
Max’ed Cumar Dhalxa oo wareysi gaar ah siinayay mid kamid ah Idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa adkeeyay in Baarlamanka Somaliya uu su’aalo weydiin doono Taliyeyaasha Ciidamada Xooga dalka,Booliska,Nanad Sugida Qaranka si markaasi loo ogaado howsha ay hayaan.
Gudoomiye Kuxigeenka Baarlamanka waxaa uu dhinaca kale si ba’an u dhaliilay qaabkii dhawaan loo magacabay safiirada dawladda Federaalka isagoona ku tilmaamay qaab aan wanaagsaneyn isla markaana baarlamanku uusan la socon.
Dhalxa waxaa uu sheegay in ay muhim tahay safiir waliba oo la magacaabayo in laso marsiiyo Golaha Baarlamanka Somaliya,si markaasi loogu codeeyo ayna Xubnaha Baarlamanka Somaliya kaga qancaan.
War Deg Deg ah: Isu socodka Gaadiidka iyo Dadka oo laga Yareeyay Wadooyinka Muqdsiho
Waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo daadiyay Ciidamo tiro badan oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira, kuwaasi oo gebi ahaanba joojiyay isu socodka dadka iyo gaadiidka.
Sababta Ciidamadan loogu soo daadiyay Waddooyinka Muqdisho ayaa la sheegay in ay la xiriirto adkeynta Nabadgelyada Muqdisho, iyo iyadoo maanta la soo gebagebeynayo Shirka Dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee mudada bil iyo barka ah ka socday Magaalada Muqdisho.
Waddooyinka Muqdisho ayaa badankood waxaa lagu arkayaa Ciidamo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira, kuwaasi oo dadka iyo gaadiidkaba ku amraya in ay dib ugu noqdaan xaafadahooda, waxayna taasi dad badan ku kaliftay in aysan saaka shaqo tegin oo ay guryahooda iska joogaan.
Ciidamadan tirada badan ee la soo dhoobay Waddooyinka Muqdisho ayaa waxay waddooyinka soo fariisteen shalay gelinkii dambe, xiligaasi oo ay bilaabeen in ay dadka maqribnimadii guryaha ku xareeyaan.
Dad badan ayaa saakay la arkayay iyagoo ka cabanayay Ciidamada lagu soo daadiyay Waddooyinka Muqdisho, iyagoo ku cabanayay in nabadgelyo darro heysatay ay ugu sii darsantay shaqo joojin.
Shirka Dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee maanta lagu soo gebagebeynayo magaalada Muqdisho ayaa la filayaa in ay ka qeybgalaan madaxda sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, isla markaana ay qudbooyin u jeediyaan ergooyinka ka socda Beelaha Soomaaliyeed ee mudada 45-ka cisho ah ku shirsanaa Xaruntii Gaadiidka Booliska ee Magaalada Muqdisho.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, Xaafado u dhow Xarunta lagu soo gebagebeynayo Shirka Dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ayaa markii shirka la furayay waxaa lagu garaacay Madaafiic Hoobiyayaal ah, weliba xili ay socotay Khudbad uu jeedinayay Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed, sababtaas darteed ayaana la sheegayaa in maanta loo xiray waddooyinka magaalada Muqdisho, si aan mar kale xarunta shirka madaafiic loogu tuurin ama aan loo carqaladeyn Xafladda Xiritaanka Shirka.
Kulamo la xiriira Shirka Asmara oo ka dhacay Dubai
Magaalada Dubai ee waddanka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa shalay oo ay taariikhdu aheyd 29ka August 2007 ayaa waxaa halkaas ku kulmay Somalida Dibedda ee u socotay Asmara, Sharif Hassan Sh. Aden, Zakariye iyo Hussein Eideed.
Shaqsiyaadka Somalida dibedda ayaa iyagu fursad u helay oo ay kula kulmeen shaqsiyaadka baarlamaanka xorta ah iyagoo ka wada hadlay kulanka la filayo inuu ka bilowdo Asmara 1da September.
Waxaa isna halkaa joogay Mudane Abdirahman Omar Osman (Eng. Yarisow) oo isagu safar gaaban ku joogay UAE. Mudane Eng. Yarisow ayaa halkaas kulammo la yeeshay Mudane Hussein Eideed, Mudane Zakariye Haaji, Mudane Sharif Hassan iyo shaqsiyaad kale oo iyagu u socday magaalada Asmara.
Shaqsiyaadkan ayaa ka wada hadlay waxa la filayo inay ka soo baxaan kulanka Asmara, waxaana la isla gartay in la tixgaliyo marxalladda siyaasaddeed ee waddanka lana dhiso urur xoogan oo ay ku mideysan yihiin dhammaan qeybaha bulshada soomaaliyeed, kaasoo u istaago sidii waddanka looga saari lahaa ciidamada Ethiopia. Mas’uuliyiintan ayaa iyagu xusay in maanta ay tahay maalintii ay ummadda soomaaliyeed ku midoobi lahaayeen oo ay mudnaanta koowaad siin lahaayeen in waddanka xal siyaasaddeed oo waara
loo heli lahaa.
War Deg Deg ah: Askari ka tirsan ciidamada Itoobiya oo Toogasha ku dilay maanta wiil yar
Ciidamada Itoobiya xooga ku qabsaday Soomaaliya ayaa maanta cunug yar oo rumeysanaayo Toogasho ku dilay kadib markii sida la sheegay ay qamaar wada dhigteen laba askari mid kamid ahna yiri hadaa yarkaan madaxa ka toogato lacagtaas ayaa iga dhimaneysa hadii aad la weysana adigana intoo kale ayaa kaa dhimaneysaa taasoo keentay in Askarigii uu shiisho yarkii dada yaraa ee isaga rumeysanaayey gurigiisa hortiisa halkaasna uu ku ruux baxay yarkii yaraa iyadoona ilaa iyo waqtigaana uu yaalo laamiga meydka yarka yar.
Yarka oo lagu dilay buushashaka ka soo horjeeda jidka janaraal Daauud ayaa waalidkii ilaa iyo hadda ay ku ag barooranayaan waaladkii dhalay iyadoona la cid uga soo qaado meydka cunugooda si ay u duugtaan.
Dhacdadaan foosha xun ay geysanayaan ciidamada Xooga ku qabsaday Soomalaiya ee Itoobiya ayaa ku soo xasuusineyso xiligii dadka madoowga ah loo iibgeyn jiray wadamada Yurub iyo Ameerika markaa oo lagu shiishbarab jiray dadka madoow waxaase cajiib ah iyadoo lagu jira qarnigii hormarka aduunka ay wali ka dhacaan dad wada Afrikaan ah isuna geystaan gumeysi iyo dil bareer ah .
Arintaan foosha xun uu geystay askariga Itoobiyaanka ah ayaa waxaa siweyn uga carooday dadka deegaanka Toowfiiq iyagoona sheegay waxa hadda ay sameyenayaan Ciidamada Itoobiya in ay waligoodba sameyn jireen.
Ma jirta cid ka tirsan DFKMG oo ka hadli karta waxa foosha xun ay sameynayaan ciidamada gumeysiga ee Itoobiya.
Wariyaashii ugu waaweynaa ee Idaacada Horn Afrkii oo isaga caray Soomaaliya kadib markii qarkood loo hanjabay
Intabadan Wariyaasha Idaacada Horn Afrik ayaa isaga soo cararay dhamaan magaalada Muqdisho iyagoona soo gaaray magaalada Nairobi si ugu nastaan dhibka lagu haayo wariyaasha ka shaqeya Muqdisho,Wariyaasha qaarkood oo loo hanjabay ayaa isaga soo cararay gudaha dalka Soomaaliya si bal ay u helaan meyl ay ku badbaado naftooda , Wariyaashaan oo horay uga shaqewyn jiray gudaha Muqdisho xili ay sidaan ka xumeed ayaa dadka badankii la yaaban sababata wariyaasha xiligaan loo ugaarsanaayo shaqadoodana in nay gutaan loodiidanyahay.
Wariyaasha soo cararay ayaa kala ah Xasan Cadde ,Falastiin ,Xasan Muuse,Xasan Sade Dhaqane ,Shaadiya iyo kuwa kale iyadoona xiligaan u muuqato in ay saxafadii Soomaaliya soo wajahday arin muruga leh.
Idaacada Horna Afrik ayaa horay looga dilay laba masuul oo ka shaqeyn jiray Idaacadaasi kuwaa oo hal maalin leysla dilay .
Suxufiyiin badan ayaa qorsheysanayo in ay isaga soo tagaan Muqdisho kuwaas oo doorbidayo wadamo shisheye in ay ku sii noolaadaan inta ay wax iska badalayaan arimaha murugada leh ee ka jira Muqdisho.
Eritrea oo Q.M ugu baaqday in ay fara galin ku sameyso arimaha Somalia
Madaxweynaha dalka Eritrea Isias Afawerk ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay Ethiopia ku war galiso in ay isaga baxdo dalka Somalia, isagoo ku eedeeyay dalalka reer galbeedka in siyaasado guracan ay ka wadaan gobolka Geeska Africa.
Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in Q.M ay si toos ah u soo fara galiso arimaha Somalia si loo helo jawi saamixi kara in Somalida ay arimahooda xalistaan.
” Mareykanka waa in ay u sheegeen Ethiopia in ay soo afjarto qabsashadeeda Somalia, waxaan ugu baaqeynaa in Q.M ay si aad u firfircoon ay u soo fara galiso Somalia, ayna ganaaxaan kuwa diidan in Somalia ay cagaheeda isku taagto”.
Dowladda Mareykanka ayaa horey ugu dartay Dowladda Eritrea liiska dalalka Taageera waxa loogu yeero argagixisada caalamiga ah ka dib markii Eritrea lagu eedeeyay in ay taageero siiso kooxaha wax iska caabinta Somalia.
Madaxweynaha Eritrea ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in arimaha Somalia loo daayo Africa loomana baahno fara galin reer Galbeed xilli uu wareysi siinayay TV ga Aljazeera.
Labo ruux oo ku geeriyootay qarax miino oo xalay ka dhacay Muqdisho
Qarax miino oo dhimasho sababay ayaa xalay ka dhacay xaafadda KPP ee degmada Hodon ee magaalada Muqdisho.Saqdii dhexe ee xalay ayaa dadka deegaanka waxa ay maqleen qarax miino oo aad u xoogan, kaasi oo gil gilay xaafadda KPP ee degmada Hodon.
Waaga markii uu baryay saakay ayaa halkaasi lagu arkay hilbo bani-aadam oo go’goan.
Afhayeen u hadlay ciidamada booliska oo la yiraahdo C/laahi Cumar ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen labo ruux oo uu sheegay in ay ahaayeen kuwii miinada dhigayay, isla markaana labo kale ay ku dhaawacmeen.
K/xigeenka madaxa xiriirka saxaafadda iyo booliska C/laahi Cumar Ibraahim Shacshac ayaa waxa uu intaasi ku daray in kooxahaasi ay qaadeen labo ruux oo dhaawacmay oo ku lug lahaa miinadaasi oo ay ku doonayeen in ay ku dhibaateeyaan dowladda KMG ah.
Ciidamada booliska ayaa saakay isku gadaamay aagga uu qaraxa ka dhacay, isla markaana joojiyay isku socodka gaadiidka, waloow markii dambe xaaladda ay caadi ku soo laabatay.
Ciidamo ka tirsan dowladda oo lacago baad ah ka qaadaya gaadiidka isticmaala wadada warshadaha
Ciidamo ka tirsan dowladda KMG ah ee Somalia ayaa saakay bilaabay lacago ay ka qaadayaan gaadiidka dadweynaha ee BL ka ah ee isticmaala wadada warshaddii hore ee taraqa iyo sigaarka ee magaalada Muqdisho.Lacagtaan ay ciidamadu ka qaadayaan gaadiidka oo gaareysa 15 kun oo Sh.som ah ayaanu jirin wax boono ah oo ciidamada ay siinayeen gaadiidka sida uu Shabelle u sheegay mid ka mid ah darawalinta oo codsaday in magiciisa aan la shaacin.
Qaar ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka ayaa walwal ka muujiyay arintaan.
K/xigeenka xafiiska xiriirka saxaafadda iyo dadweynaha ee ciidamada booliska C/laahi Cumar Ibraahim ayaa waxa uu sheegay in aysan la socon arimahaasi, hasa ahaatee ay baaritaano ku sameynayaan, isagoona sheegay in ay baarayaan, isla markaana ay wax ka qaban doonaan.
Ma ahan markii ugu horreysay oo cabasho ay ka soo yeerto gaadiidleyda ka shaqeya gobolka Banadir oo ku aadan lacago baad ah oo laga qaado.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Agoosto, 2007.